✅ साइकल ट्राडर ट्रेडिंग संकेतक --डे व्यापार ट्रेडिन ES500 | NQ100 - NinjaTrader 8 जब तपाइँसँग साइकल ट्र्रिडर प्रयोग गरेर लाभदायक व्यापार छ भने, पैसा कमाउन गाह्रो छैन।
CT ट्रेडिंग प्रणाली
दर्ता / डेमो
साइकल ट्राडर कस्टम ट्रेडिंग सूचकहरू
CycleTrader कस्टम ओटो ट्रेडिंग सिस्टम - रणनीतिहरु
हामी NinjaTrader7र 8 मा चलाउछौं
CycleTRADER डेमो डाउनलोड गर्नुहोस्
ग्राहक टिप्पणी - सूचक - जुन 25th
ठूलो काम जेरोम !!! यो नयाँ CT09 बियर डेल्टा प्रोफाइल सूचक हामीलाई बजार प्रवेश गर्न र बाहिर निस्कन गम्भीर किनारा दिन्छ। एक स्मार्ट व्यापारको लागि योजना बनाउन तपाईंको लामो अवधिका चार्टहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईं गणितमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने लाभदायक परिणामहरू छन् !!! यो नयाँ हामीलाई गम्भीर किनारा दिन्छ। जब हामी कल बोल्दै थियौं, मैले पछिल्लो हप्ता $ 7,400 ले पुरानो सीटी संकेतकहरू र $ 312 $ गत रातको व्यापारमा नयाँ संकेतकहरूको साथमा उनीहरूलाई एकसाथ डाउनलोड गरेपछि र $ 2,500 आज। CT09 लाई माया गर्नुहोस् ... यहाँ प्रमाण छ। धन्यवाद!!
जिम आर रिएल्ट / डे ट्रेडर, CA
ग्राहक टिप्पणी - सूचक - जुन 26th
म केही पटक पहिले जलाएको छ र जब मैले जेरोमलाई आफ्ना संकेतकहरूको बारेमा सम्पर्क गरें, मैले उनलाई सोधें किन उनी अझ राम्रो किन। उनको जवाफ डेमो प्रयास गरिरहेको थियो र पहिलोलाई हेर्दै थियो। मैले यो गरे र आज मैले ती किन्नुभयो। मैले मूल्य बिन्दु पहिले भन्दा राम्रो प्रविष्ट गर्न को लागी सक्षम थिए। उस्तै सीटी 09 सूचकले मलाई उत्कृष्ट निकास प्रदान गर्यो। यो सृष्टिको लागि जेरोम धन्यवाद। यसले मलाई व्यापार गर्ने तरिका परिवर्तन गर्दछ र म अहिले पैसा कमाउँदैछु। माथि 1450 आज 1 देखि4मा ES 500 मा धेरै।
CycleTrader चिकनी चार्ट NT8
साइकल ट्राडर ओटो ट्रेडिंग सिस्टम्स NT8
साइकल ट्राडर सूचक / प्रणाली NT7
साइकल ट्राडर उत्पाद शिक्षा
NinjaTrader प्राप्त गर्नुहोस्
सान फ्रान्सस्कोस्को प्रभाव
कहिल्यै बायाँ पछाडि जानुहोस्
मत्स्य पालन गर्नुहोस्
© प्रतिलिपि अधिकार 1988 -2019 ब्रेकरर्ट ट्रेडिंग टेक्नोलोजी, LLC। - शुक्र, जुलाई 19, 2019
ग्राहक टिप्पणी - सूचकहरू
वाह, उत्कृष्ट पाठ्यक्रम !!! म यसलाई हेर्छु, तपाईं सही हुनुहुन्छ! तपाईं धेरै राम्रो मूल्यहरूमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्येक व्यापारको बारेमा आत्मविश्वास महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो मलाई देखाउनको लागि धन्यबाद ... मेरो पहिलो दिन यी नमूनाहरूसँग खेलिरहेको 875 माथि। तपाईं पॉट को गोल्ड हुन सक्छ! धन्यवाद!
रेनी आर। शिकागो
ग्राहक टिप्पणी - संकेतकहरु - जुन 18th, 2019
नमस्ते मैले मलाई तपाइँको व्यापारिक प्रणाली मन परायो। मैले पहिलो दिनमा $ NNUMX डलर बनाएको निन्जा व्यापारीको सिम्युलेटर खाताको साथ। त्यसैले मैले आज उनलाई खरीद गरे।
... म वास्तवमा सूचकहरू जस्तै !!!
दान BR - डे ट्रेड्स
नमस्ते जेरोम, मलाई तपाईलाई थाहा छ कि चिकनी भोल्युम सूचक प्रयोग गरी व्यापार अविश्वसनीय छ ...
जॉन एल / डे ट्रेड्स
ग्राहक टिप्पणी - प्रणाली - जुन 11th, 2019
मैले भर्खरै 50 दिनमा शीर्ष चरण 11K गठबन्धनको चरण पूरा गर्यो। X 1003 रणनीति प्रयोग गरेर!
जीन प्रणाली प्रणाली
ग्राहक टिप्पणी - सूचक - मई 31st, 2019
जेरोम- संकेतकहरूसँग मेरो पहिलो दिनमा आज राम्रो दिन थियो। ई-मिनीमा $ 1900 खाली गरियो। यो साँच्चै मेरो चश्मा खोज्न मन लाग्यो र बजारमा स्पष्ट तरिकाले अन्यत्र उपलब्ध छैन कि तरिकामा हेर्न सक्षम बनाइयो। - म फिर्ता सर्कल गर्नेछु र सप्ताहांतमा मेरो खरिद पूरा गर्नेछ- आशा छ कि तपाईसँग राम्रो छ।
... म चाहन्छु, र हुनेछ, कहिल्यै चकलेट ट्राडरप्रो बिना कहिल्यै व्यापार!
टम - Mercersburg, PA
ग्राहक टिप्पणी - संकेतकहरु - जुन 21st
आधिकारिक रूपमा 1 घण्टा र 40 मिनेटमा म $ 1,000 व्यापारमा 1 मिनेट चार्ट मात्र केवल एक्सएनएमएमएक्स अनुबंध र 1 व्यापार आवश्यक हुँदा व्यापार। केवल तपाईंले मलाई देखाउनु भएको व्यापारमा व्यापार ... यो वास्तवमा कम्तिमा कमजोरी हो जुन मैले व्यापार गरिरहेको छु।
मलाई यकीन छैन कि यदि त्यहाँ अरू कसैलाई त्यहाँ एक संकेतक को रूपमा जसलाई तपाईं गर्नुहुन्छ को रूपमा देखाउँछ। तर प्रवृत्ति देख्न सुनको टिकट हो! धेरै राम्रो काम!
म अब ट्रेडहरू लिनु पर्दासम्म सम्म मैले VMIa भोल्युम सूचकांक मूल्य र बूमको रूपमा एकै दिशामा जाँदै गरेको संस्करण देख्न सक्दिन! वाह!
ग्राहक टिप्पणी - संकेतकहरु - जुन 20th, 2019
मैले VMI र हरियो रेखालाई बार नम्बरको साथ माया गर्थें। ठूलो काम जेरोम। धन्यवाद
मैले आफैलाई पत्ता लगाए जब मैले साइकलट्रयाडर सिस्टमहरू फेला पारेँ। अचम्म नतिजाहरु। यूरोले $ 6335 बनायो, र त्यसपछि अर्को $ 3800 ... तपाईलाई धेरै प्रणालीहरू जर्जो, तपाईंले हाम्रो लागि यी प्रणालीहरू विकास गर्न ऐतिहासिक काम गर्नुभयो।
बार्ट डी - सिस्टम व्यापारी जर्मनी
मैले थप मूल्याङ्कन गरेपछि संकेतकहरू मनपर्थ्यो - मैले ती किन्नुभयो! यो साँच्चै म कसरी व्यापार गर्न चाहन्छु। यो वास्तविक समय व्यापारमा प्रयोग गर्न साँच्चै बहुमूल्य मद्दत जस्तो लाग्छ। तपाईंसँग मेरो उद्देश्यका लागि एकदम राम्रो उत्पादन छ। म स्पष्ट रूपमा सम्बद्ध छु कि तपाईं बजारको फाइदा लिने स्थितिमा छन्।
आदम सी - डे ट्रेडर्स
जेरोम - सीटी 34 समर्थन / प्रतिरोध विन्डोज र सीटी 09 बार भोल्युम डेल्टा अवास्तविक छन्।
यो पागल छ कि म विपरीत गर्छु म सामान्यतया जब डेल्टा बारहरू आउँछ, अर्थात रातो मा बिक्री गर्छु। अब म एउटा विण्डोमा जान्छु र रातो किन्न र हरी बेच्न खोज्छु किनकि यसले कसरी काम गर्छ र अब यो अद्यावधिक गरिएको चाइल्ड ट्रेडर संकेतकबाट हेर्न सक्छु।
जे भए पनि मेरो लागि अर्को खेल परिवर्तक। यो दुई दिन पछि यो 15 मिनेट डेल्टा बार चार्टमा हिर्काउँछ
रबर्ट - डे ट्रेडर्स
ग्राहक टिप्पणी - संकेतकहरु - जुन 19th, 2019
Jerome, - शब्दले साइकल ट्रेडरको कार्यक्षमता वर्णन गर्न सक्दैन। तपाईं बस व्यापारीहरू धेरै हतियारहरू कि पूर्ण रूपमा अनुकूलन योग्य खर्च गर्न दिन दिन र दिन बाहिर बिट गर्न को लागि ... .complete understatement। धेरै अद्यावधिकहरू र अपग्रेडहरू जुन पहिले देखि नै अनूठा र लागू सफ्टवेयरमा सुधार गर्दछ तपाईँ कहिल्यै विस्फोट गर्न नसक्नु हुन्छ। तपाईं एक वास्तविक वास्तुकार हुनुहुन्छ, एक व्यापारी व्यापारी।
सधै सँधै विकासशील बजारहरूमा अनुकूलन गर्दै अझै कोर मेनेजोलोजीसँग राख्दछ। नयाँ डेल्टा बार भोल्युम र TRUE समर्थन / प्रतिरोधी सञ्झ्यालहरू / जोन्सहरूसँग हालैको अद्यावधिक मैले जस्तै देखेको केही चीज जस्तो छैन। तपाईं बेच्न लगाउन र विश्लेषणको कुनै पनि खुराक बिना खरीद गर्न कहिले थाहा छ। आजको व्यापारमा आउन कठिन छ। पूर्णतया उद्देश्य व्यापार।
धेरैले तपाईंको सफ्टवेयर संग लाभ उठाउनेछ। म एक सानो धेरै व्यापारी हुँ (2-3 अनुबंध) र यसको दुर्लभ छ कि म आफ्नो 1K दैनिक लक्ष्य तपाईंको सफ्टवेयर को उपयोग को पूरा नहीं गर्छन। यो Xray चश्मेहरू जस्तै छ र तपाईं गेहूं हुने गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ। केवल "गणित पछ्याउनुहोस्" जस्तो कि तपाई भन्नुहुन्छ। थप सत्य हुन सकेन।
अंक झूटो छैन!
रबर्ट - साइकल ट्रेडर दिवस ट्रेडर।
काल्पनिक प्रदर्शन परिणाम तल वर्णन गरिएको केही जो धेरै निहित सीमितता, छ। कुनै प्रतिनिधित्व कुनै पनि खाता हुनेछ गरे वा लाभ हासिल गर्न संभावना छ वा देखाइएको ती समान हराउछ भइरहेको छ; वास्तवमा, त्यहाँ प्रदर्शन परिणाम र वास्तविक परिणाम त्यसपछि कुनै पनि विशेष व्यापार कार्यक्रम द्वारा हासिल काल्पनिक बीच बारम्बार तीव्र मतभेद छन्।
प्रदर्शन परिणाम काल्पनिक को सीमितता को एक तिनीहरूले आम hindsight फाइदाको संग तयार छन् भन्ने हो। साथै, काल्पनिक व्यापार वित्तीय जोखिम समावेश छैन, र कुनै काल्पनिक व्यापार रेकर्ड वास्तविक व्यापार को वित्तीय जोखिम को प्रभाव लागि खाता पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, क्षमता हराउछ सामना गर्न वा व्यापार बाबजुद अनुपलब्ध मा एक विशेष व्यापार कार्यक्रम पालन गर्न पनि adversely वास्तविक व्यापार परिणाम असर गर्न सक्छ, जो सामाग्री अंक हो।
फ्यूचर्स र विदेशी मुद्रा व्यापार पर्याप्त समावेश छन्: त्यहाँ Adversely व्यापार परिणाम जोखिम खुलासा असर गर्न सक्छ, जो सामान्य वा कुनै पनि विशिष्ट व्यापार कार्यक्रम प्रदर्शन परिणाम काल्पनिक को तयारी मा लागि पूर्ण हिसाब गर्न सकिन्छ जो को कार्यान्वयन गर्न र सबै बजार सम्बन्धित धेरै अन्य कारक हो जोखिम र हरेक निवेशक लागि छैन। एक निवेशक संभावित प्रारम्भिक लगानी भन्दा सबै वा धेरै गुमाउन सक्छ। जोखिम राजधानी व्यक्तिहरूलाई वित्तीय सुरक्षा वा जीवन शैली jeopardizing बिना नष्ट गर्न सक्ने पैसा छ। जोखिम राजधानी मात्र व्यापार को लागि प्रयोग हुनुपर्छ र मात्र पर्याप्त जोखिम राजधानी ती व्यापार विचार गर्नुपर्छ। विगत प्रदर्शन भविष्य परिणाम आवश्यक संकेत छैन। प्रकटीकरण: जमानत र वस्तुहरु लगानी पर्याप्त जोखिम समावेश र जमानत को बिक्री र खरिद गर्न सम्बन्धित सबै जोखिम बुझ्न बिना ल्याइनेछ गर्नुपर्छ।
herein वर्णन cycletrader, profittrader सफ्टवेयर लगानी निर्णयमा लगानीकर्ताले सहयोग गर्न एक उपकरण डिजाइन गरिएको छ। तपाईं मूल्यांकन र कुनै पनि लेनदेन, र आफ्नो छनौट को औचित्य निर्धारण लागि संलग्न हुँदा र के सर्तहरू मा निर्धारण लागि एकमात्र जिम्मेवारी छ।
जमानत वा वस्तुहरु लगानी गरेर, तपाईं आफ्नो सबै पैसा पैसा गुमाउन गर्न सक्नुहुन्छ। विगत प्रदर्शन भविष्य परिणाम ग्यारेन्टी छैन। वास्तवमा कुनै पनि व्यापार प्रणाली यस साइटमा वर्णन तपाईं कुनै पनि पैसा बनाउन सक्दैन र माथि सूचीबद्ध संलग्न जोखिम बुझ्न आवश्यक छ।
हामी यो खुलासा गर्न आवश्यक छ - यो प्रस्तुतीकरण शैक्षिक उद्देश्यहरूको लागि हो र केवल व्यक्तिकै मात्र प्रेन्टरको हो। सबै व्यापार प्रस्तुत प्रस्तुत कोल्पनिक विचार गरिनु पर्छ र एक लाइभ ट्रेडिंग खाता मा दोहोरो को लागी अपेक्षा गरेन जाना चाहिए।
यस वेबसाइटमा देखा पर्दा अन्य ग्राहक वा ग्राहकहरूको प्रतिनिधि हुन सक्दैन र भविष्यका प्रदर्शन वा सफलताको ग्यारेन्टी होइन।